दाङ उबासंघका कोषाध्यक्ष पोख्रेलले आफैले आफैलाइ प्रश्न सोध्दा कार्य समिती सदस्यकै कडा जवाफ ! - जागरण अनलाइन
दाङ उबासंघका कोषाध्यक्ष पोख्रेलले आफैले आफैलाइ प्रश्न सोध्दा कार्य समिती सदस्यकै कडा जवाफ !
२०७८ बैशाख १५, बुधबार १७:२३
दाङ । दाङ जिल्ला उद्याेग बाणिज्य संघको नयाँ नेतृत्व चुन्न गएको चुनाबमा नै प्यानमा जाने सहमती भइ लागू भइसक्दा समेत संघकै एक जना पदाधिकारिले आफैले आफैलाई प्रश्न सोधेका छन ।
प्यान लागू गरेर भोट हाल्न दिने बिषय पारित भइ कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि संघका कोषाध्यक्ष सुशील पोख्रेलले आफैले आफैलाइ प्रश्न सोध्दा हासोको पात्र बनेका छन । लागू गर्ने आफै भएर सामाजिक सन्जालमा आफैलाइ प्रश्न सोध्दा अहिले पोख्रेलको सामाजिक सन्जालमा दिएको अभिब्यक्ति लज्जाको बिषय बनेको छ ।
कार्य समिती सदस्य देबकला बस्नेतले पोख्रेलको अभिब्यक्तिमाथि कडा ब्यङ्ग्य प्रहार गरेकि छिन । सामाजिक सन्जालमा पोख्रेलले लेखेको स्टयाटस मुनि कमेन्ट गर्दै बस्नेतले लेख्छीन-कोषाध्यक्ष ज्यु को यो प्रस्न कस्लाइ हो?अचम्म छ । ´
पोख्रेलले सामाजीक सन्जालमा-`दाङ जिल्ला उद्याेग बाणिजय संघको साधारण सदस्य हुनका लागि pan नम्बर अनिबार्य छ र ? भन्ने लेखेका थिए । आफै कार्य समितिमा बसेर गैरजिम्मेवारि पुर्ण कुरा गरेपछि पोख्रेल आलोचित बनेका छन । पोख्रेेलकै कार्यकालमा साधारण सभा तथा अधिबेशनमा १४ लाख खर्च भएको थियो । सस्थाकै उपाध्यक्ष अनिल आचार्यले साधारण सभा र अधिबेशन खर्च छानबिन गर्न माग गरेपछि छानबिन नगरेर दबाइएको थियो ।